Realme 8i - Nyocha nwere ọnụahịa na atụmatụ | Androidsis
Miguel Hernandez | 14/10/2021 10:00 | Noticias, Nyocha
Realme na-aga n'ihu na-afanye ahịa ekwentị n'etiti etiti oge niile dị iche iche, na nke a ọ bụ oge ị nweta ihe na ya ihe ọ juiceụ moreụ na usoro Realme 8 site na mmeghari ohuru nke ngwaike na arụ ọrụ na ọnụahịa gbanwere nke na -anọchite anya Realme 8i. N'ụzọ dị otu a, Realme 7i na -eweghara nwanne ya nwoke nke okenye.
Chọpụta anyị Realme 8i ọhụrụ, ngwaọrụ na -eji ihuenyo 120 Hz na Helio G96 na -eme ka ime ya dị ọhụrụ. Anyị ga-enyocha ya nke ọma iji chọpụta njirimara ya ma ọ bụrụ na ọ ga-achị n'ezie n'etiti etiti gam akporo.
Dịka n'oge ọ bụla, anyị ekpebiela isoro vidiyo a soro ọmarịcha ọwa anyị YouTube ebe ị ga -enwe ike lelee ule ndị emegoro yana ịdebe igbe nke Realme 8i a. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike ịzụta ya na euro 169 na Amazon. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike lelee nyocha anyị banyere nwanne ya nwoke nke okenye Realme 8.
1 Kere: Realme anaghị etinye ihe egwu wee gaa n'ihu na kpochapụwo
3 Ahụmịhe mgbasa ozi na nnwere onwe
4 Nnwale igwefoto na Realme UI 2.0
Kere: Realme anaghị etinye ihe egwu wee gaa n'ihu na kpochapụwo
Site na Realme 8i a anyị na -achọta ọnụ na-akpọ gị ka ị chee echiche banyere ụlọ dị elu mana nke na-akwado plastic. Nke a bụ otu ha siri hụ nkwụsi ike ziri ezi n'etiti ịdị arọ na nha. Ma ọ bụ na o ketara atụmatụ na akụrụngwa kpamkpam n'aka "nwanne ya nwoke nke okenye." Ọdịiche dị mkpa bụ na ọtụtụ LEDs maka ọkụ nke dị na ala nke igwefoto igwefoto oge a ka etinyere n'ime otu ihe mmetụta, yabụ, anyị nwere obere igwefoto karịa na Realme 8 dịka anyị ga -ahụ n'okpuru.
Akụkụ: 164,1 x 75,5 x 8,5 mm
Arọ: gram 194
N'ebe a na maka ihe doro anya, ihe eji emepụta ihe a masịrị ọdụ ahụ, mana nke a abụghị ihe kpatara na ọ dị nfe dịka anyị nwere ike iche n'echiche, ọ na -adịgide na gram 194, nke bụ gram 20 karịa Realme 8, ihe na -adabaghị nke ọma mgbe anyị tụlere na ọ bụ naanị 0,2 sentimita ka ibu n'usoro. gaa na ihuenyo. N'ọnọdụ ọ bụla, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nwere ihe na -eguzogide ọgwụ, n'agbanyeghị eziokwu na nzọ ụkwụ nwere mmetụta na -adọrọ mmasị na azụ.
Na ọkwa ngwaike, Realme 8i ọhụrụ a gbara mbọ ịwepụta oke Helio G96 sitere na MediaTek, ihe nrụpụta nke na -adịbeghị anya site na onye nrụpụta na nke na -edozi MediaTek n'ime Realme, nke kachasị na ọkwa ya dị ala na -agba nzọ na ndị nhazi a, n'agbanyeghị na -enye nsonaazụ dị mma. Na -enye ike dịtụ elu karịa Helio G95 na ya na 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa na ngalaba anyị nwalere.
Ihe nhazi: Helio G96
Nchekwa: 64 / 128 GB
Njikọ: USB-C / Bluetooth 5.1 / WiFi 5 / LTE 4G
Ihe niile ịkwaga Realme UI 2.0, akwa nhazi nke Realme na gam akporo 11. Na ọkwa njikọta, Relame 8i pụtara site na nke kacha mma na ọkwa nkwukọrịta, yabụ nzọ na 4G LTE maka ọrụ ndị a, mgbe na -ejigidekwa kaadị network WiFi 5, mmegharị nke anyị na -aghọtachaghị nke ọma ịtụle etu ndị na -anya ụgbọ elu nwere WiFi 6 si baa uru na uru ya niile. Na ọkwa njikọ Bluetooth, ha na-akụkwa na Bluetooth 5.1 (nke abụghị ụdị kacha ọhụrụ) na ala anyị nwere njikọ USB-C.
Ahụmịhe mgbasa ozi na nnwere onwe
Banyere obodo, anyị nwere 5.000 mAh na ụgwọ “ọsịsọ” karịrị naanị otu awa. Ihe ngwugwu a bu chaja 18W na eriri USB-C, mana anyị agaghị enwe ekweisi n'agbanyeghị na anyị nwere Jack 3,5mm. Anyị enweghịkwa njikọ NFC, obere isi ihe nwere ike ime mgbanwe ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụahịa nke ọdụ ụgbọ mmiri na nhọrọ nke asọmpi ahụ. Anyị enweghị, maka ebumnuche doro anya, ụdị chaja ikuku ọ bụla maka Realme 8i a, akụkụ ndị ọzọ na -ewepụ anyị na ọkwa ekwentị kacha mma.
Ihuenyo nwere ihe nkiri echekwara
6,6 ″ LCD na mkpebi HD zuru ezu
Ntinye ume ọhụrụ 120 Hz
N'aka nke ya, anyị nwere nnukwu anụ ọhịa 6,6 inch nwere mkpebi HD zuru oke nke edoziri nke ọma na-enwu ekele maka ume ọhụrụ 120 Hz, yana nzaghachi mmetụ aka nke 180 Hz. Anyị nwere ụda mono, na mpaghara ala nke ọdụ ụgbọ ala, nke ahụ dịkwa ike ma zuo oke, na -enweghị mgbanwe ọ bụla pụtara ìhè. Otu ihe ahụ na -eme na ihie ihuenyo ahụ, na -enweghị ozi akọwapụtara nke ọma, ihie ya zuru oke dịka ọ na -adịkarị maka ogwe LCD. Nke a na -ahazi nke ọma na ụda.
Nnwale igwefoto na Realme UI 2.0
Anyị nwere ihe mmetụta bụ isi nke 50 MP nwere oghere f / 1.8 na ọ na -agbachitere onwe ya nke ọma yana na ọ na -ata ahụhụ dịka anyị na -eme ọdịiche na yana ntụpọ pụtara ìhè na ọnọdụ obere ọkụ.
Ọ na -esonyere ya site na ihe mmetụta 2 MP nwere oghere f / 2.4 Macro maka foto ndị mechiri emechi, ihe mmetụta nke ụdị ndị nrụpụta a na -ekwusi ike ịgụnye yana onye m na -ajụ mgbe niile uru ya, nke a ga -eji nnukwu akụkụ were dochie ya. N'ikpeazụ, ihe mmetụta 2 MP nwere oghere monochrome f / 2.4, Anyị na -eche na iji meziwanye nsonaazụ nke eserese ahụ.
Ndekọ Ọ na -enye nkwụsi ike nke ọma na enweghị igwefoto ọ bụla na -enye nsonaazụ dị mma na ọdịiche ma ọ bụ n'ọnọdụ gbara ọchịchịrị. N'akụkụ nke ya, Igwefoto selfie nke 16 MP nwere oghere f / 2.0 na -enye nsonaazụ zuru oke iji mee ka anyị pụọ na nsogbu site na iji selfie nke ọma gosipụtara na ọnọdụ ịma mma Realme.
Zụta Realme 8i na ọnụahịa kachasị mma
Realme UI 2.0 ahapụla ụtọ ihe ụtọ n'ọnụ m, N'oge ahụ, Realme bịarutere Spain site na iji asacha ọkọlọtọ sistemụ arụmọrụ ya wee mee ya. Ọ bụ ezie na ọkwa imewe Realme UI 2.0 na -enwe ọmarịcha ma mara mma na agba pastel ya na okirikiri dị larịị, ahụmịhe ahụ nwere ọtụtụ bloatware kpuchie.
Ihe mmetụta mkpịsị aka ahụ na -agagharị n'akụkụ okpokolo agba
Ọ ga-abụrịrị na ọ nwere ihe mmetụta abụọ na-eso ya nwere ike nyefee ọdụ ụgbọ ala, echere m mgbe niile na Apple na Google na-eme nke ọma site n'itinye obere ihe mmetụta dị elu, na nke ahụ bụ ihe ndị nrụpụta n'etiti etiti na-amụtabeghị. Obodo nweere onwe ya ziri ezi iji nnukwu ike were ụbọchị na ibu ahụ ga -ewe anyị ntakịrị ihe karịa otu elekere nyere 18W nke ike ibu.
€169 a €196
Ihe na: 14 October nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 9 October nke 2021
Nnukwu ihuenyo nwere ezigbo mkpebi
Ezigbo nnwere onwe
Igwefoto dị mma
Enweghị WiFi 6 ma ọ bụ Bluetooth 5.2
Ọnụahịa ahụ nwere ike sie ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Realme 8i: nzọ ọhụrụ maka etiti nwere ezigbo atụmatụ
Etu esi ebudata vidiyo TikTok na -enweghị akara mmiri na SSSTikTok